Sargaal sare oo katirsanaa Ciidanka Nabad Sugida Soomaaliya oo Caawa lagu dilay Magaalada Muqdisho | warsugansomaliya.wordpress.com
Kooxo Hubeesan ayaa caawa Isgooska Banaadir ee Magaalada Muqdisho waxa ay ku toogteen Sargaal sare oo katirsanaa Ciidanka Nabad Sugida Dowlada Soomaaliya.
Rag Biskoolado ku hubeesan ayaa toogtay Sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay C/Raxmaan Caato oo ahaa Taliyihii Ciidanka Nabad Sugida ee Degmada Dharkeenley waxaana la sheegay Kooxaha hubeesan ee dilay Sargaalkan in ay ka qaateen Bistoolad uu watay.
Daqiiqado yar kadib markii la dilay Sargaalkan katirsanaa Ciidanka Nabad Sugida Soomaaliya ayaa waxaa goobta lagu dilay soo gaaray ciidamo katirsan Dowlada oo halkaasi ka qaaday Meydka Sargaalkan howlgalana goobtaasi ka sameeyay.
Ma jiro cid sheegatay dilka ninkan la sheegay in uu ahaa Taliyihii Ciidanka Nabad Sugida ee Degmada Dharkeenley , mana jiraan wax war ah oo kasoo baxay taliska Nabad Sugida Soomaaliya oo ku aadan dilka Sargaalkan katirsanaa Nabad Sugida.
← Waraysi gaara uu Madaxwaynuhu siiyay TV Universal uuna kaga waramay xaalka guud ee wadanka siyasad ahaan iyo horumar ahaanba halka uu marayo.
C/raxmaan Faroole oo Shuruudo adag la yimid Hanjabaad culusna u diray Xukuumadda Somalia(Warbixin Xasaasi ah) →